Beesha Garre oo diidey Xildhibaano been abuur ah oo la gudbiyay – idalenews.com
Kaddib kulan ballaaran oo ay maanta ku yeesheen Magaalada Muqdisho Waxgarad, Odayaal dhaqmeedyo, Siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kasoo jeeda beesha Garre ayaa waxa ay kasoo horjeesteen qaabka loo xulay Xildhibaanada beeshaasi ay ku leedahay barlamanka cusub ee soo socda.
Kullankaani ayaa waxa ka hadlay Mas’uuliyiinta Beesha Garre kuwaasi oo sheegay in si cadaalad darro ah oo aysan u dhameyn beesha loo xulay Xildhibaanada beeshaasi ay ku leedahay barlamanka cusub, waxaana ay baaq u jeediyeen Madaxda ugu sareysa Dowladda, Midowga Afrika, IGAD, Xafiiska Qaramada Midoobay Soomaaliya ee UNPOS iyo cid kasta oo ay sheegeen inay quseyso arrintaani.
Cismaan Aadan Max’ed oo ka mid ah Aqooyahannada Beesha Garre ee maanta kullankaasi ka qeyb galay ayaa waxa uu sheegay in Beesha aysan ka tashan Xubnaha loo xulay inay ka mid noqdaan Xildhibaanada cusub, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah arrinkaani wax looga qabto islamarkaana Beesha Garre dib loogu soo celiyo Xubnaha ay ku leedahay barlamanka cusub.
Sidoo kale waxaa kullankaasi ka hadlay Nabadoon Aadan Warfaa oo ka mid ah Waxgaradka Beesha Garre kaasi oo sheegay in Beesha Garre ay si cad ugu soo horjeedo, marnbana ay san aqbaleynin in wax aysan u dhameyn Beesha Garre ay ka mid noqdaan Xildhibaanada cusub.
Kullankaani ayaa waxa sidoo kale ka hadlay Nabadoon Aadan Max’ed Cismaan oo sheegay in lagama maarmaan ay tahay in Madaxda Dowladda ay si deg deg ah usoo faro galliyaan arrinkaani, maadaama uu xusay in Xubno aysan Beesha ka tashan loo qoray inay ka mid noqdaan Xildhibaanada cusub, isagoo intaasi ku daray in Xubnaha loo qoray beesha aysan kala garaneyn deegaannada ay degto Beesha.
Ugu dambeyn Beesha Garre ayaa waxa si isku mid waxa ay kaga codsatay Beesha Caalamka iyo Madaxda Dowladda in Xubnahaani oo ay magacyadoodu ku sheegeen Xasan Cismaan Qoryooley, C/kaafi Macalin iyo Faadumo Nuur oo ay tibaaxeen in labo ka mid ah ay muddo seeded sano ah xilkaasi iska hayeen oo ay tilmaameen in beesha Garre iyo Umadda Soomaaliyeedba aysan waxba usoo kordhin